China Gel ziso mask fekitori uye vagadziri | Huanyi
Kupisa uye Kutonhora Komputa, Reusable, Hapana kuburitsa, Isina-chepfu
Kukura: 19 * 9cm, 20 * 10cm, 22 * ​​11.5cm
Kurema: 120g, 130g, 160g, 180g
Inoshandiswa pakurapa kupisa uye kunotonhora kunobatsira kubvisa maziso akazvimba, maziso anozvikudza, sinus kusagadzikana, migraines, inopa zororo risina mishonga. Inogona kushandiswa seyakavhara-kuvhara maziso masiki pane tembiricha yemukamuri.
Iyo inoratidzika kunge mask, uye zvechokwadi inogona kushandisa sechinhu chinotonhora cheziso, asi usatarise kufunga kwako. Ichi chigadzirwa chakakosha pakupisa compress kana kutonhora compress, nekudaro iwe unogona kuiisa kune chero chikamu chemuviri. Netambo, inogona kusungirirwa pagokora, mabvi, gumbo uye mamwe majoini anoda kupisa compress inorapwa. Ichi chigadzirwa ndechechokwadi multifunctional "masaji" michina uye haufanirwe kuipotsa.
KUDZIVISA KUKONZESA KWEGI ZISO MASKI: Kumuka wakaneta uye kuzvimba maziso akatakurwa nerima denderedzwa haisiyo yakanakisa kutanga kune chero zuva. Ice gel ziso masiki anoderedza kuzvimba, simbisa inoshanda kuzorora!
KUSHANDA KUSVIRA KWEMASO MASKI: inotonhora mask yemeso anozvitutumadza anobatsira kudzikamisa kurwadziwa nekuzvimba kunogona kukonzerwa nekuda kweakawanda akati wandei nyaya dzehutano. Gel bead inotonhodza ziso mask ine RUBBERIZED SUNGIRA.
HOT & KUTONHORA KURAPWA KWEMESO: Gel ziso mask inotonhora pack inogona kuomeswa nechando kune inozorodza spa senge kana kupisa kweanodziya kurapwa. Frozen Gel ziso mask inogadzirwa neine yakapfava lining iyo inogara zvinyoro pameso ako.
Kunyangwe iwe uri kuishandisa yekurapa inopisa kana inotonhora, iyo tembiricha haifanire kunge yakanyanyisa kupisa kana kutonhora. Dzivisa basa rekukonzeresa kukuvara kwechigadzirwa uye kukuvadza magemenzi ejeri.
Pashure: ice mitten
Zvadaro: waini inotonhorera bhegi
Cold gel ziso compress
Gel Inodziya Kumanikidza Kwemaziso
Kupisa Gel Ziso Compress